Khanyisa - isitho esibalulekile kakhulu, okuyinto incike kakhulu empilweni yomuntu futhi ukusebenza kwawo wonke umzimba iyonke. Njengoba amaphaphu kukhona, omunye angase athi, uhlobo lemifanekiso, ngokuhamba kwesikhathi bandisa zonke ukungcola ezikhona esiwuphefumulayo. Ngakho umbuzo yokuhlanza kubalulekile kuwo wonke umuntu, kodwa ebaluleke kakhulu abantu ababhemayo nalabo ukuyeka lesi sejwayezi elimazayo.
Imithombo ukungcola ukukhanya
Ngokwemvelo, abaluleke kakhulu kuwo (non-ukubhema) iba kakhulu emoyeni, ikakhulukazi emadolobheni. Lapha nothuli, emapayipini nophethiloli, nitshale kwekhabhoni. Eyesibili umthombo - amandla ukuthi indoda yesimanje ekude kakhulu ekahle. Noma yimuphi vkusnosti eziyingozi, izithasiselo, nezivimbelakuvunda, GMO yotshwala - konke neqhaza ekuqongeleleni e umgudu wokuphefumula izidakamizwa eziyingozi kanye isikhwehlela. Ukuntuleka kokukhulumisana ukunyakaza (kanye ukuphefumula ngendlela efanele, ngaphansi njalo futhi engajulile) nakho kunomthelela ukungcola umgudu wokuphefumula. Zonke lezi zici kuholele yokuthi akukho abangakwenza ngaphandle kokuhlala ukuhlanza emaphashini.
Amathiphu wangaphambili ababhemayo
Ukunqatshwa osikilidi ngokwayo - kwesokudla, isinyathelo esibalulekile futhi omuhle. Kodwa ngemva kwakhe, kufanele ulandele enengqondo walungisiswa: kubalulekile ukuthola indlela ukusula emaphashini nicotine futhi ubasize inqubo ukuzithiba ukuthi uhlanzekile. Indlela lelula usizo olunjalo kungenziwa ngokuthi ukuhamba nge ehlathini. Uma engekho eduze, yikhiphe ufake mkhosi okwalandelwa ukuthungela softwood impepho izinduku. Indlela ukuhlanza emaphashini inhalations, iyiphi kucace - konke okungenani kanye, kodwa babhekana nazo. Kubalulekile ukukhetha ilungelo kuka ukuba sikwazi ukuphefumula, okungukuthi, imbali Linden, umjunipha, zikagamthilini, * nomthidari, uphayini, Mint. Futhi ungakhohlwa ukuthi ngemva kokuhlinzwa hhayi kungaba isigamu sehora noma ukuphuma ushaywe noma ukukhuluma. Indlela ezithakazelisayo kulula ukuhlanza - okugeza Russian. Uma umusi futhi umshanelo birch, umphumela kuzokhulisa ngezinye izikhathi. Futhi uma ungeza la matshe expectorate inqubo namafutha ngeke uhambe ngokushesha ngisho.
Labo usanda zahlangana non-ababhemayo kufanele relearn indlela yokuphefumula - ngiqonde kuba ukuphefumula lesifanele. Indlela enhle ukusula amaphaphu obhemayo - ibhotela nge ubisi olufudumele, ngemva kwalokho wenze ejimini noma hamba uyokwenza i run epaki, ngomfula noma kwenye indawo kude emgwaqweni.
Lokho leluleka abantu
Futhi abantu izikhathi "premedical" wabukela impilo izitho zokuphefumula. Ziningi izindlela ukuhlanza emaphashini. Ngokwesibonelo, ukumnika of iliquorice (2 tsp), nembali Linden (1 isipuni); amakhambi zigcwele amanzi abilayo for isigamu sehora. Uma ngenyanga njalo izikhathi 3 ngosuku ukuphuza Potion, emaphashini uyoba njengomuthi omusha. Abantu nabo weluleka impande elecampane. Uma 15 g we isitshalo isimangaliso uthele izinkomishi zamanzi abilayo, kuthatha isigamu sehora ukufika ukugcizelela futhi niphuza nabathelisi uju, ngokuvamile ngo sips amancane, isikhwehlela ubuthi ovela emaphashini uya khona.
Hhayi-ke, uma uke angiphindanga ngabhema, kodwa ufuna ukuthuthukisa uhlelo lwabo zokuphefumula, uthole oluzayo iholidi ehlobo guest house ogwini lolwandle, lapho eziningi namanje and kaphayini amahlathi. Amaviki amabili e mibandela, ukwesekwa okukhulu, uvuselele bese zokukhipha igciwane amaphaphu akho.
Traffic obuyela emuva endleleni